सहोदर दिदी-बहिनीको झगडाले शिशुको मुखमा एसिड ! - Everest Dainik - News from Nepal
सहोदर दिदी-बहिनीको झगडाले शिशुको मुखमा एसिड !
अछाम, असोज ५ । जिल्लाको तुर्माखाद गाउँपालिका ४ चिसीका ६ महिने मुस्कान बयकको मुखमा एसिड छ्यापिएको घटना पारिवारिक कलहकै कारण भएको खुलेको छ ।
उनकी २१ बर्षीया काकी जानकी बयकले प्रहरीसमक्ष पारिवारिक कलहकै कारण आफैंले एसिड छ्यापेको स्वीकारेकी छन् । मृतककी आमा र जानकी घरका जेठानी देवरानी हुन् भने माइतिघरका सहोदर दिदी-बहिनी पनि हुन् । मुस्कानका बुबा महावीरले बेलाबेला झगडा पर्ने गरेको बताए ।
याे पनि पढ्नुस यसकारण उत्खनन् गरियो पार्वती बुढाको शव
‘मेरो छोरो गर्भमा हुँदा जानकीले छोरो जन्मिए ज्युँदो नराख्ने धम्की दिएकी थिइन् । उनले भने, मेरो श्रीमतिले उनलाई २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । पैसा तिर्न आलि ढिलो भए पछि उनले भदौ २९ गते झगडा गरेकी थिइन् ।
याे पनि पढ्नुस चट्याङ लागेर अछाममा १५ जना घाइते, ७ जनाको अवस्था गम्भीर
त्यसै दिन अबको दुई दिनपछि तलाईं देखाइदिन्छु भनेकी थिइन् । नभन्दै २ गते छोरामाथि यस्तो घटना भयो ।’ प्रहरीसँगको बयानमा जानकीले भनेकी छन्, ‘बच्चा रुन थालेपछि पानी हो भनेर २ थोपा खुवाएकी हुँ ।’ बयानका क्रममा दिदीबहिनीको झगडा भइराख्ने र २९ गते पनि लेनदेन विषयमा भनाभन भएको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस डेटिङमा समस्या आएपछि आमाले छोरी बेचिन् !
ट्याग्स: acham, Asid, Chaild Death